Shiinaha MSZH mashiinka kartoonka waxsoosaarka waxsoosaarka iyo warshad | Yuanhengtong
Baaxadda codsiga Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa furitaanka sanduuqa otomaatigga ah, gelitaanka sanduuqa iyo otomaatigga alaabooyinka Muuqaallo waxaa ka mid ah: dhalada dhalada ah, sanduuqa wax soo saarka tuubada, sanduuqa wax soo saarka ee bacda, aluminium caag ah Daawada saxanka ku jirta sanduuqa, kooxo dhowr ah oo alaab ah sanduuqa, iwm. Qalabku waa dhakhso, sax yahay oo wuxuu gaari karaa hawlgal xasilloon illaa 40 ~ 120 / min, wuxuu beddeli karaa buugga 2-5. Sharaxaad Qalabka ayaa ah nooc cusub oo qalab ah oo lagu soo saaray horumarin ballaaran oo gudaha iyo dibaddaba ah ...
Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa furitaanka sanduuqa otomaatigga ah, sanduuqa galaya iyo otomatiga alaabada
Muuqaallada waxaa ka mid ah: dhalada sanduuqa jirka, sanduuqa wax soo saarka tuubada, sanduuqa alaabta bacda, aluminium caag ah
Daawada saxanka ku rid sanduuqa, dhowr qaybood oo alaab ah sanduuqa dhexdiisa, iwm. Qalabku waa dhakhso, sax yahay wuuna gaari karaa
Hawlgal xasilloon illaa 40 ~ 120 / min, wuxuu beddeli karaa buugga 2-5.
Qalabkani waa nooc cusub oo qalab ah oo lagu soo saarey iyadoo lagu saleynayo tikniyoolajiyad casri ah oo horumarsan oo gudaha iyo dibedda ah. Waa badeecad tiknoolajiyad sare leh oo ka mid ah isu-soo-ururinta gaaska, is-dhexgalka indhaha, farsamada iyo korontada, taasoo si weyn u wanaajinaysa waxqabadka iyo waxtarka shaqada ee qalabka, ogaanaya xirxirashada degdegga ah, waxayna u socotaa si deggan oo lagu kalsoonaan karo hawlgalka degdegga ah.
Mashiinkani wuxuu ku habboon yahay dhalada (dhalada wareega, dhalada laba jibbaaran) ama dhalada dhalada ah si ay si otomaatig ah u gasho sanduuqa. Kala soocida dhalada khadka tooska ah iyo rarka, hal laab (1-4 laab) iyo rarid, hal soo saarid, kalabixinta kartoonka iyo qaabeynta, badeecada iyo hal ku riix kartoonka, daabac tirada tirada, kuna xir sanduuqa shaashadda ama aaladda dhalaalka kulul ee dhalaalaya. Diidmada otomaatiga ah ee alaabta maqan ama hal go 'ama alaabooyinka la dhammeeyay iyo alaabooyinka dhammaaday.
Waxay dhameystiri kartaa habab taxane ah, oo ay kujiraan dhalada daroogada ama keenista daroogada, laabashada gacanta (1-4 jeer laab laabashada) iyo gaarsiinta, furitaanka kartoonka, sameynta iyo gaarsiinta, tilmaamaha iyo laalaabida, shaabad garaynta nambarka tirada iyo labo luqadood oo xaashi ah oo isku laaban kartoonka . Mashiinkaan waxaa loogu talagalay si adag oo waafaqsan shuruudaha GMP. Qolofkeedu wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah oo tayo sare leh. Barxada howlgalka waxaa lagu xiray albaabo iyo daaqado plexiglass ah. Qaybta gudbinta sidoo kale waxay leedahay hawsha ilaalinta xad dhaafka ah iyo joogsiga degdegga ah. Nidaamka xakamaynta, iskudhafka mashiinka bini'aadamka waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo nabadgelyada hawlwadeennada.
1. Mashiinka wuxuu leeyahay qaab dhismeed is haysta oo macquul ah, waxqabad xasiloon oo horumarsan iyo hawlgal haboon.
2. Marti-geliyuhu wuxuu qaataa sharciyeynta xawaaraha beddelka soo noqnoqda. (xawaaraha xirxirida waxaa loo dhigi karaa 30-120 gogo 'daqiiqadii iyadoo la raacayo qalabka wax lagu rakibo iyo dhibaatada xirxirida.)
3. PLC waxaa loo isticmaalaa xakamaynta otomaatiga ah.
4. Adeegso qaybaha caalamiga ah ee korantada iyo pneumatic.
5. HMI waxay soo bandhigi kartaa xawaaraha baakadaha iyo tirinta otomaatiga ah.
6. Qalabka aaladda korontada ku shaqeeya ee xoogga badan wuxuu ogaadaa hawlgalka qayb kasta. Wax kasta oo ka reeban inta lagu jiro hawlgalka si toos ah ayaa loo soo bandhigi karaa si markaa qaladka looga saaro waqtiga.
7. Mashiinkaan waxaa lagu shaqeyn karaa gacanta ama si otomaatig ah.
8. Waxay ku qalabeysan tahay nidaamka ogaanshaha otomaatigga ah ee loogu talagalay inuu ka digo oo ka saaro alaabada cilladaysan, oo uu xiro mashiinka ka dib hawlgal gaar ah.
9. Jooji mashiinka markii culeys badan saaran yahay.
Awood 40-120 A / daqiiqad
Cadaadis Shaqo 0.4-0.6mpa
Shuruudaha Awooda Korantada 220V 、 50 / 60Hz
Baaxadda Mashiinka 2220 （L） * 700 （W） * 1600 （H）
Miisaanka guud 260KG
Xiga: Mashiinka Baakadaha Mashiinka Mashiinka Si Buuxda U Shaqeeya